Yintoni eyahlukileyo koomama abakhulelweyo nabagqiba kubeleka ngexesha lentsholongwane i-COVID-19? – Messages for Mothers
Iimpawu zentsholongwane ye-COVID-19 ziyafana koomama abakhulelweyo njengoluntu ngokubanzi. Wonke ubani kufuneka azikhathalele ukuze anqande ukusuleleka okanye ukusulela abanye. Unceda ukuzikhusela ngokuthi:
Nxiba ilaphu lokogquma umlomo kwiindawo zikawonkewonke.
Hlamba izandla ngesepha kangangoko unakho imizuzwana engama 20 (okanye usebenzise isicoci esibulala iintsholongwane esinotywala)
Zama ukuma iimitha ezi 2 kude nabanye, ukuba unakho yaye unqande iindawo ezigcwele abantu.
Nqanda ukubamba ubuso bakho.
Sebenzisa ukuphefumla ngococeko. Oku kuthetha ukuba khohlela okanye uthimlele kwingqiniba yakho egobileyo uvale umlomo nempumlo yakho, okanye kwiphetshana elithambileyo nekufuneka ulilahlele kwinto evaliweyo wandule ukuhlamba izandla zakho ngesepha imizuzwana engama 20.
Vula iifestile apho kufanelekileyo yaye ugcine imigangatho yendlu icocekile ngeetispuni ezine zeblitshi kwilitha enye yamanzi. Gcina iblitshi ingafikeleleki ebantwaneni.
← Should I still take my baby for immunisations: Kentelo ya Bana → Ingaba intsholongwane i-COVID-19 iyakuchaphazela ukukhulelwa kwam?